Ikhaya eliluhlaza okwesibini kabini!
Indawo yokuhlala epholileyo engqongwe ngumoya woxolo kunye namandla endalo. Ibekwe kufutshane neholo lezemidlalo (iZoppas Arena, 500 m) kunye neziko leConegliano kunye nesikhululo sikaloliwe (2 km), imizuzu engama-40 ukusuka kwisixeko sothando saseVenice kunye nemizuzu engama-30 nje ukusuka kwiDolomites entle. Le ndawo yokuhlala yeyakho ukuba ujonge indawo yokuhlala enexabiso eliphantsi kodwa awufuni ukuyeka ukonwabela ubuhle beVeneto.
Le ndlu inekhitshi, igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela labucala. Igumbi lokulala lixhotyiswe ngesifuba sedrowa. Kwakhona ungasebenzisa umatshini wokuhlamba ukuba kuyimfuneko. Indlu yakhiwe ngeendlela zokugcina amandla ezifana nokufudumeza ngaphantsi kwigumbi ngalinye kunye nokwahlula ii-inverters ezishushu ezibandayo kwigumbi lokulala.